Abavelisi be-Hinge Dovers kunye nabathengisi | Yongeza
Ikhaya > Iimveliso > Hinge > Umnyango hinge
I-hinge ye-hinge iluncedo olufanelekileyo lwempahla yokuqhagamshela ucango ngefreyimu yesakhelo, ekunokuba lula ukuvula amatyala amaninzi, uyababona besebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeengcango.
I-Coddod Dumes lukhetho lwakho lobulumko, isiqinisekiso semihlambi sibandakanya iintlobo ezahlukeneyo ze-hinges, i-hingese hinges, i-hinges emnyango we-iron, enesithambiso, ukubonelela ngeentlobo ngeentlobo ze-chinges kunye ne-chinges Iimpawu ezahlukeneyo zokufezekisa iimfuno zakho. Zonke iimveliso zethu ziye zavavanywa kwe-SGS ezingqongqo, kwaye i-hinge nganye iye yahlolwa ngokungqongqo.
I-Addrith Commnyango i-hinges yeyona nto yethu iluncedo kwaye iboniswe izixhobo zeHardware. Kwangelo xesha, siyakwazi ukubonelela ngexabiso elifanelekileyo kwaye lilawule ngokungqongqo umgangatho.
Izinto zethu ezingalawulekiyo zenziwa ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, intsimbi engenasibala, egudileyo kwaye icocekile, kwaye ingekho lula, kwaye ixhathisa ityiwa kunye nenkungu. Ubugcisa obuhle bwenza i-hinge ivulekile kwaye ivale nangayiphi na i-angle kakhulu. Emva kwamashumi amawaka eeSwitches, isagudileyo kwaye ayinamathi.